Rose (Rosehip) wrinkled: nkọwa na foto nke ụdị ewu - Ornamental osisi na-eto eto - 2020
Ụdị wrinkled rose (anụ ọhịa): aha na nkọwa
Ọtụtụ mgbe, n'ime ubi, anụ ọhịa na-ekpo ọkụ, nke na-esi ísì ụtọ ma na-adọrọ mmasị, na okooko ya, ụdị dịgasị iche iche nke ga-eme ka akụkụ ọ bụla mara mma. Rose wrinkled (ma ọ bụ ọhịa ọhịa) rutere n'ógbè anyị site n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa, ebe a na-ewere ya dị ka osisi na-eto eto.
Ọ na-acha ọkụ n'oge niile, na-anabata frosts, oké ọkọchị na enweghị atụ na ala. Okpokoro ahụ na-agbanye Ome na mkpịsị ọkụ, na-eme ka ọ dị mma maka ịmepụta ogige. Rose wrinkled ji ya iguzogide ọ bụla ọrịa na pests.
Ị ma? N'okpuru ụwa, a ghọtara ụdị iri anụ ọhịa dị iche iche. Ufodu ndi okachamara nwere ihe di iche iche di iche iche nke Rugoza.
Mmiri wrinkled na-acha ọkụ nke mbụ, na mbubreyo June. Ndị a bụ osisi ndị na-esi ísì ụtọ na n'oge okooko ha na-agbasa ọgaranya ma na-atọ ụtọ. Rosemary wrinkled na-agụnye ọtụtụ ụdị ewu ewu, aha na nkọwa nke dị n'okpuru ebe a:
"Queen nke North"
"Ígwé ojii ojii anyị"
A na-akpọ "Conrad Ferdinand Meyer" elu ahụ aha ya bụ onye ama ederede Switzerland. Ụlọ osisi a na-abawanye elu nke 2-2.5 mita, na-eto eto n'obosara ruo mita 1.5. Osisi ndị ahụ bụ pink, buru ibu, a na-ehulata anụ ndị ahụ n'akụkụ ọnụ. Ihe ísì ụtọ bụ ọgaranya ma dị ụtọ. Ulo na-acha odo odo, nke a na-ahụkarị maka ngwakọ Rugosa.
Ọ dị mkpa! Rosa "Conrad Ferdinand Meyer" na-adịkarị na ájá na ájá, ma ọ bụrụ na ị na-eme ya na mgbatị pụrụ iche n'oge na-eme ngbochi oge, a pụrụ izere ọrịa ndị a.
Osisi na-eto ngwa ngwa, ya mere, site n'oge ruo n'oge, a ghaghị ịkpụ ya ma belata iji kpalite uto nke okooko osisi.
Rugelda bụ ụdị dị iche iche nke Rugoza. Ogo nke ohia di ihe dika 1.7 m, obosara rue 1.25 m. Ihe dị iche na ya bụ n'eziokwu na-acha odo odo na-ekpughe okooko odo odo. N'ime oge, ha na-aghọ ude.
Petals na-agba ọsọ ma yie ụdị pompons. Na brushes buru ibu nwere ike ịnọ site na ise ise na ise. Mkpụrụ - prickly, oké. Rose ohia nwere ike iru ruo mita 2 n'ịdị elu (na oke ọkụ).
Rose "Queen of the North" na-agba mgba site n'oge mgbụsị akwụkwọ ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ. Differs na nnukwu okooko osisi (12 cm ke dayameta) na bara uru vitamin tomato. N'ime oge ubi, a na-ekpuchi rose ahụ na okooko osisi na tomato. Ohia okenye nke "Queen of the North" nwere ike inwe oge iri na ise na okooko osisi.
Rosa Rugoza "Rubra" - na-agbanye shrub ruo 2-2.5 mita n'ịdị elu. Okpokoro okooko osisi na-esi ísì ụtọ na dayameta nke 6-12 cm nwere ike inwe agba dị iche iche. Rose wrinkled blooms "Rubra" n'oge okpomọkụ, mgbe ọzọ. Doo - wrinkled na a onu na elu. Mkpụrụ - nnukwu site na-acha ọbara ọbara na-acha uhie uhie, 2.5 cm ke dayameta.
Nke a dị elu nke na-eguzogide ọgwụ na ntu oyi. Ọ bụ ihe na-adịghị mma maka ihe mejupụtara ala ma dị mfe n 'mmezi. A na-ejikarị ya eme ihe na nhazi nke otu na imepụta oke.
Rose wrinkled "Alba" bụ ngwakọ nke sitere na Europe. Na mba anyị, a naghị ahụ ụdị dịgasị iche iche na ubi na ogige ntụrụndụ, n'ihi na ọ na-etolite nanị n'ihi ebumnuche e ji achọ. Okooko osisi mara mma nke a, ọ bụ ezie na ọ bụghị ruo ogologo oge, ma na-enwe mmasị na anya ya na agba ya mara mma ma ga-enyere aka icho ọhia ma ọ bụ uzo ọ bụla.
Ị ma? Rosa Rugoza "Alba" bụ onye a ma ama n'etiti ndị ọrụ ubi na njedebe nke narị afọ nke iri na ise. Na Europe, a kụrụ ya iji kpoo ogige na ogige ntụrụndụ.
Okpoko osisi nke rose na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha ọcha-ọcha, ruo 5-8 cm ke dayameta. The Alba dogrose nwere ziri ezi na-eto eto bushes na ike Ome. Elu nke bushes rute mita abụọ. Okpokoro ahụ na-agbaji naanị otu ugboro n'oge okpomọkụ na okooko ya dị ruo ụbọchị 30. Mkpụrụ osisi Rose adịghị eweta. O nwere ezigbo iguzogide ntu oyi, ọrịa na pests.
A na-ewere Rose "Pink Noz Clouds" dị ka otu n'ime ụdị oyi na-atụkarịsị oyi na ọrịa. Okpokoro okooko osisi okpukpu abụọ na-acha odo odo nke nwere ihe na-esi ísì ụtọ nwere ọdịdị gbara gburugburu ma yie ihe mgbapụta. Alaka ọ bụla nwere ihe dị ka petals 40. Ka oge na-aga, agba nke petals na-acha ọcha pink, nke nwere isi ihe. Na-achịkọta okooko osisi na brushes dị mma nke 15-20 PC. Osimiri na-eme na njedebe nke June. N'otu oge ahụ, ọhịa ahụ na-atụgharị n'ụzọ nkịtị ghọọ ígwé ojii ígwé ojii.
Okpokoro bụ eguzogide oyi (na-eguzogide -40 Celsius C) ma ọ dịghị mkpa kwachaa.
RA na-ele ụdị "Hans" dị iche iche nke zoro ezo dị ka otu n'ime osisi Roses kacha mma ma chọọ. Elu nke ohia ruru mita abụọ, obosara ya dịkwa 1.5 mita.
Buds - elongated na mara. Okooko osisi - shaggy, lilac agba na stamens ọlaedo n'etiti. Ebere obere ụyọkọ nke 3-5 okooko osisi. Mkpụrụ ndị ahụ yiri obere tomato, akwụkwọ ahụ na-achakwa mmiri, nke bụ ụdị Roses wrinkled, na karịsịa, maka "Rugoza" bilitere. Ọ na-acha oge okpomọkụ na ruo mgbe ntu oyi.
Ọ dị mkpa! Rose "Hans" dị mma maka ogige dị ala. Ọ bụrụ na a gaghị ebipụ ya, mgbe ahụ, ọ gafere oge ọ ga-abanye n'ime osisi mara mma nke nwere okpueze nche anwụ.
Osisi "Hans" nke osisi na-etolite nnukwu ahihia nke nwere ike ihicha n'ime etiti n'ihi enweghị ìhè. Nke a dịgasị iche iche na-eguzogide ọgwụ na ọrịa na pests.
"Charles Albanel" bụ onye ọkpụkpụ Rugosa bilie, nke a na-ahụ maka okooko osisi pink na akwa terry abụọ. Osisi dị iche iche na-acha odo odo, na-enwupụta ọkụ n'ime ya. Na ahịhịa bụ 3-7 okooko osisi. Mkpụrụ - gburugburu, nnukwu. A na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ma ohia na-amụbawanye n'obosara. Osimiri na-eme ruo ntu oyi. Nke a na-eguzogide ọgwụ na ọrịa na pests.
Rose "Jenz Munch" bụ otu n'ime ndị na-eguzogide ọgwụ nke Rugoza. Differs ke pink cupped okooko osisi na akpụkpọ ụkwụ stamens. Osisi ndị dị na aka 2-5 iberibe ma nwee mkpụmkpụ akwụkwọ. Rose na-agbagharị na ebili mmiri, n'oge okpomọkụ na ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ọ nwere ike ịgbasa mfe site na grafting. A na - acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, wrinkled. Ihe dịgasị iche iche nwere ezigbo iguzogide ọrịa na pests. Ogo nke oke ohia ruru mita 1.2 n'obosara - rue mita 1.25.
Ya mere, ọ bụrụ na ị kpebie ịkụ mkpụrụ rose na nrọ gị, ị kwesịrị ị mara onwe gị na ụdị ya na ụdị ya. Ụfọdụ n'ime ha dị mma maka mpaghara ugwu, ndị ọzọ maka ndị na-ekpo ọkụ, ebe ha nwere ike itolite dị ka ihe mma nke ubi, maka ịme ogige ma ọ bụ maka inweta mkpụrụ osisi bara uru.